Shan waxyaabood oo laga bartay guushii ay Barcelona ka gaartay Real Betis… (MSN oo rikoodh ay horay u dhigeen jabiyey) – Gool FM
Liverpool oo wali la qaban La’a yahay kaddib markii ay guul muhiim ah ka gaartay Man United…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool Iyo Man Utd ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Cristiano Ronaldo oo doonaya inuu dhaafo Rikoodhka halyeega reer France ee Michel Platini
In ka badan Saddex bilood oo aan laga badin… Taxane cajiibka ah uu Zidane ka sameeyay Real Madrid
Kooxda Real Madrid oo qarka u saaran inay Man United ku garaacdo saxiixa xiddig ka tirsan Ajax
Real Madrid oo ka jawaabtay dalabyada amaahda ah ee u imaanaya James Rodriguez
Shan waxyaabood oo laga bartay guushii ay Barcelona ka gaartay Real Betis… (MSN oo rikoodh ay horay u dhigeen jabiyey)
Haaruun May 1, 2016
(Real Betis) 01 Maajo 2016 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul ka gaartay Real Betis oo ay marti u ahayd kulan ku tirsan horyaalka La Ligaha Spain, iyadoo wiilasha MSN la isku yiraahdo ee Messi, Suarez iyo Neymar ay jabiyeen rikoodh ay horay u dhigeen.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Estadio Benito Villamarin ayay Barcelona kooxda Real Betis kaga adkaaday 2-0, waxaana Barca labada gool u kala dhaliyey Rakitic 50’daqiiqo iyo Suarez 81’daqiiqo.
>- Luis Suarez waa kaliya ciyaaryahanka labaad ee Barcelona kaasoo gaaray 35 gool iyo wax ka badan hal xilli ciyaareed horyaalka La Liga, kaddib Lionel Messi.
>- Lionel Messi ayaa 127 caawin ka sameeyey horyaalka La Ligaha Spain, waxaana uu 50 caawin ka badan dheer yahay weeraryahanada kale ee La Liga.
>- Luis Suarez ayaa hadda u dhaliyey 55 gool kooxdiisa iyo dalkiisa xilli ciyaareedkan.
>- Lionel Messi ayaa sameeyey 55 caawin tan iyo 2012/13, ugu yaraan waxa uu 6 dheer yahan xiddigaha kale ee ka ciyaara shanta horyaalka ee ugu wayn Yurub.
>- Weeraryahannada MSN ee Messi, Suarez iyo Neymar ayaa jabiyey rikoodh ay horey u sameeyeen sanadkii la soo dhaafay ee ahaa inay dhaliyeen 122-gool, maxaa yeelay hadda waxa ay wadar ahaan dhaliyeen 123-gool.
Bale: Waa suuro gal inaan ku guuleysanno La Liga waana ku dagaalameynaa
Taariikhda ayaa ka horjeeda: Old Trafford galabta dib uma dhigi karo xaflada Leicester!